Hemorrhoids, ngemuva kwalokhu ozobizwa abantu ne emerods, ngokuvamile kubhekwa isifo okuyihlazo. Njengoba Bathi, futhi wangabona, kanye nezinye ngeke ibonise. Eqinisweni, kukhona nhlobo elifanele ukuphoxeka: ubufakazi yamuva sisikisela ukuthi okungenani kanye ezimpilweni zabo, 85% of the labantu ebhekene nale nkinga. Khona manje, sizama ukuqonda ukuthi yini lesi sifo, yiziphi ayatholakala futhi engabizi amakhambi azo hemorrhoids. Abesilisa nabesifazane asebeneminyaka banaso lesi sifo Kwenzeka okufanayo, kodwa namuhla sifuna ukukhuluma ngabobulili namandla.
enkingeni Ngokucophelela iqala ukunwetshwa plexus emithambo yegazi ku umsele bendunu. Lokho umthambo i-ingemuva ukuqeda futhi yakha sebuningini convolutions we ohlobo: igazi kubo ihamba kancane ngenxa yemvelo umzimba, kungase stagnate. Ngenxa yalokho, izitsha uvuleke bese yakha Izigaxana elibuhlungu lokuthi ungayeki umuntu uphila impilo egcwele: kunzima ukuya ethoyilethi, akanakuma, kepha uyaphela isikhathi eside, ungakwazi okwesikhashana bayakhohlwa awulutho kuNkulunkulu. Kulesi simo, ukusiza suppositories hemorrhoidal ahlukahlukene yokugcoba nezinye izidakamizwa ukuthi basuke ebekwe odokotela.
Isizathu esikhulu hemorrhoids - ukugeleza kwegazi kuliphazamise ingemuva, kanye nobuthakathaka emisipheni Amapaki nemisipha longitudinal umsebenzi wabo oyinhloko ezibambe izindikimba cavernous. Ngenxa yalokho, baba "baphume" - lesi sifo ngenkuthalo ethuthuka. Izinto eziyinhloko ukuthi kumkhathaze ukuthuthukiswa sifo ukuphila umzimba, ukudla okungenamsoco, onzima ngokomzimba, nobunzima uchama, isifo esithathelwanayo, ukudakwa kanye nezici ezithile sitholwa njengefa.
Amakhandlela Bheka ne hemorrhoids kudingeka umuntu lapho kuqubuka lesi sifo. By the way, amadoda banayo uhlamvu wave-like futhi ukulandelana ezithile ngakho wayephambanisa nabo enye inkinga noma ukuziba akunakwenzeka. Uphawu lokuqala hemorrhoids - umuzwa ukungakhululeki ku ingemuva. Indoda ecabanga ukuthi ingquza lezinto angaphandle. Khona-ke kukhona kumiswa ngamaqhubu, sokwephulwa kwe yabo: indoda ezwe ubuhlungu esivuthayo. Libuye libonise ukuvuvukala ukubukeka imifantu kule ingquza.
Abaningi bathi i-main uphawu hemorrhoids is ukopha. Kwenzeka ngesikhathi ukunyakaza wamathumbu noma ngokushesha ngemva kokuba. igazi iconsi zingase kwesihlalo. Eqinisweni, lena akuyona ngaso sonke isikhathi. In iziguli eziningi, igazi ningagcini. Abanye futhi kungenzeka i uphawu eyengeziwe - ukubukeka eczema emhlabeni ingquza kanye perineum, evutha ukuzwa futhi ukulunywa. Uma ikamu ukuqubuka, kungaba kukhule, okuyinto igcwele ukuxakeka.
Indlela ukuqeda ka hemorrhoids, ukutshela udokotela. Iphinde uyosingatha ukuhlolwa futhi unqume ukuthi iziphi uhlobo lesi sifo samanje esimweni sakho. Kuye indawo ISIZINDA, le hemorrhoid eyangaphakathi, yangaphandle futhi kuhlanganiswe. I last eyodwa - buhlungu kakhulu futhi Ezingalapheki njengoba imfundo akuzona kuphela emathunjini, kodwa futhi emhlabeni ingquza uhlevane ongama. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo kungase kube oyingozi noma ezingamahlalakhona. Esimweni sokuqala sibangelwa ngokushesha futhi kubangela ubuhlungu obukhulu, kodwa yesibili iqala kancane kancane - emizweni ezingemnandi kushintshane ngcono okwesikhashana.
Amadoda amaningi ayenamahloni inkinga yabo ngokuthi untekenteke futhi kukhona ekujaheni ukubhekana kuya Proctologist noma udokotela ohlinzayo, ecabanga ukuthi isifo kuzodlula ngokwalo. Kodwa lokhu kuyiphutha elikhulu - ukuze ukwazi ukuqala lesi sifo. Uma imishanguzo bayonikezwa ngokushesha futhi ngendlela efanele usaqala, kuyoba ngempumelelo ngaphezulu. Abathandwayo, kodwa isiqongo isifo ewela iminyaka engu-40. Lonyaka libhekene phambi komuntu yezinkinga ezihlukahlukene. Isiguli ungakwazi ukuxilonga ukulahlekelwa wamathumbu nezinye izinkathazo.
It is a uhlobo izinyathelo ezivumelana hemorrhoids. Uphilisa for hemorrhoids ezingabantu ebekiwe kuncike ekutheni, ngasiphi nesigaba lesi sifo ihlala obucayi:
isigaba esicashile. Ngulona logeleta cishe kungabonakali. Abukho ubuhlungu, kukhona kuphela ukulunywa okuncane nokusha emhlabeni ingquza. Ungase wamukele igazi - okuncane ngesikhathi sokuzikhulula.
Eyesibili esiteji. Libhekene ukungamethembi ISIZINDA zangaphakathi ngaphandle uma nokuphakamisa izinsimbi, e inqubo bethulula. Nciphisa self.
Umvuthwandaba. I Izigaxana ukugqashuka ubuyele indawo yayo yasekuqaleni akunakwenzeka. Kunezindlela eziningi ubuhlungu, kukhona amathuba ukopha.
isigaba Yethulwe. ISIZINDA hhayi kuphela baphume, base phumela eceleni ingxenye ingemuva. Ngokuvamile sezinyawo ivelele yezimo abhekene, basuke exutshwe eziningi isikhwehlela emathunjini.
Ngesikhathi sigaba sokugcina ingaqala yezinkinga eziningi: thrombosis, ithumba neminye imiphumela edabukisayo.
Yini ukhethe ikhandlela hemorrhoids - analogue ezishibhile yasekhaya noma amazwe - udokotela enquma. Ngaphambi kobana azinze kulawo noma ngezinye izindlela, it uqhuba uphethwe enemininingwane nangokuhlola ngokujulile umzimba besilisa. Yenza kube lula. Okokuqala, udokotela ehlola le ingquza kanye ingemuva kunesithembiso palpation. Ngakho, inquma ukuthi kunezinguquko sokugembula, ngasiphi isigaba futhi uhlobo lesi sifo. Ukuze ususe ezinye izifo zona ungase uhambisane hemorrhoids, esimisiwe rectoscopy - inqubo elikuvumela ukuhlola isimo emathunjini buqamama kude.
Kukhona enye indlela esingathola - enema barium yombala. Indlela nalolu lubaluleke kakhulu, ngoba nge kungenzeka ukuthola ulwazi lemininingwane mayelana nokuthi umzimba womuntu yangaphakathi, ukukhomba kusaqalwa izifo ezihlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, isiguli Kunconywa ukuba iphumelele ekuhlolweni eziyisisekelo: umchamo, indle kanye igazi umunwe. ngemva kwalokhu lwemithi yokwelapha kuphela ezothuthukiswa futhi ngabelwa izidakamizwa ethize. Inkambo ngokuvamile Uthatha kwezinsuku ezinhlanu kuya emasontweni amathathu, kuye ngezinga of isifo ukunganakwa. Into eyinhloko ukuhambisana nayo yonke izincomo udokotela, ngisho noma ucabanga ukuthi ukugula ahlehla.
Lena enye yezinhlobo ezingu amathuluzi engcono ekulweni nalesi sifo uyazondwa. suppositories Hemorrhoidal usizo ngokushesha ukopha. Bona okudambisa ubuhlungu kule ingquza, okuyinto ebaluleke kakhulu indlela amadoda. Kwimakethe inikeza anhlobonhlobo suppositories ezahlukene. Ethandwa kakhulu - "Impumuzo" okubize ruble 280. Balwa omkhulu yisihlungu, ukubulala amagciwane, amanxeba kanye ukuqinisa amasosha omzimba. Phakathi ezibizayo angawodwa "Proctosedyl" kulekelelwa antibiotic "Procto-glivenol" lidocaine "Ultraproct" esekelwe amafutha kakhukhunathi kanye "Ginkor Procto" nge isiqetjhana isitshalo.
Ungathenga amakhandlela eshibhile kusuka hemorrhoids: ezishibhile "Anuzol", "Anestezol" noma "Betiol". intengo zabo zokhahlamba kusuka ruble 40 kuya ku-60. Naphezu kwalokhu, neze nozakwabo phansi kunabaphostoli ezibizayo: unayo anti-webhaktheriya, eqeda ukuvuvukala kanye hemostatic nomphumela ofanayo. Kufanele kuqashelwe namakhandlela "Natalsid": sibonga ngezithako zawo zemvelo, they are kasibili ayinangozi. Basuke ebekiwe ngisho abesifazane abakhulelwe kanye nezingane ezisencane.
Abantu bayakwazi ukusebenzisa ezinye izindlela. A mkhuba omuhle ekwelapheni hemorrhoids ukukhombisa Wamafutha. Sinenkosi kunezinzuzo eziningi: ukusebenza kahle eliphezulu, kulula ukuyisebenzisa, wakwazi yini ukusebenzisa nganoma isiphi isikhathi sosuku. Abaningi babo kungaba ukuziqhayisa Ukwakheka zemvelo. Proctologists ukuncoma banake "Kusuka Umthwalo Emahlombe" - wamafutha kokuba inombolo enkulu wokubuyekezwa okuvumelekile. ibha okuphezulu futhi ugcine izidakamizwa ezinjalo "Troxevasin", "Posterisan", "Glivenol", "Proktozan" futhi "Heparin wamafutha." Bonke bangabangasokile kulula ukuyisebenzisa. kuphakama Ububi kuphela ngenxa ukuvuza, okuyinto zingase zimiswe phezu zangaphansi. Isizathu izidakamizwa amafutha-based, ngenxa okuyinto izingxenye zawo kungukuthi ugxile ngokugcwele.
"Kusuka Umthwalo Emahlombe" - wamafutha kuyasiza kakhulu kusaqalwa kumiswa hemorrhoids. Ezigabeni kamuva ingasetshenziswa "Bezornil" - umuthi ubhekana proctitis kanye nezinye izinkinga ezenzeka ngokumelene ngemuva kwalesi sifo. isixazululo UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki kwaba ukusetshenziswa amakha phezu izikhwama ngaphansi kwamehlo. Njengoba okuningi njengoba kungase kuzwakale nakuba thina singababoni, ikwazi ukusiza nge hemorrhoids ngokuthuthukisa kwegazi legazi futhi sithuthukise izitsha turgor hemorrhoidal.
Wamafutha nge hemorrhoids ngokuqinisekile has a ukusebenza kahle eliphezulu. Kodwa amadoda akufanele bayakhohlwa ngamaphilisi usizo ukuqeda lesi sifo. Kusukela jikelele imithi mass ngokuvamile proctology kukhona izidakamizwa ezilandelayo:
"Hemoroidin" - yemvelo futhi iphephile. Siqukethe eziningi amakhambi ezikhishwe okuyinto isenzo sibhekiswe eqinisa izindonga isitsha. Ngaphezu kwalokho, abasusa ukulunywa, ukushiswa nokuvuvukala.
"Litovit-B." Enye ukulungiselela ngezindleko zemithi engamakhambi. Ithuthukisa isihlalo, okuyinto ebaluleke kakhulu hemorrhoids. Siyabonga kuye, inqubo sokuzikhulula cishe kobuhlungu. Futhi, amaphilisi isinyathelo kuma-capillary, abenze nokunwebeka ngaphezulu eqinile.
"Detraleks" - omunye amaphilisi ephumelela kunazo. Khulisa ithoni ngemithambo. Kakade emva olulodwa ukusetshenziswa kwegazi ingemuva kokuvamile.
Izibhebhe kukhona elula kakhulu ukusebenzisa. Thatha noma kunini ngaphansi yokubhekana nezimo ezihlukahlukene: emsebenzini, endaweni yokudlela noma ngesikhathi bezilolonga at ebhayisikobho.
Ngeshwa, hhayi njalo ukusiza ukwelapha hemorrhoids: amadoda kungase kudingeke zonke izinhlobo yezinkinga ezidinga kokungenela kuhlinzwa. Eyodwa yezindlela eziningi zalezi zinsuku - indlela lokho okubizwa ngomlobokazi Longo. Ngo osekelwe kuyo - resection ungqimba mucosal we-colon. Okusho ukuthi, ngosizo nommese udokotela ohlinzayo sika ezinquma zonke ezindaweni ezithintekile. Uma hemorrhoids kukhona olukhona kusenesikhathi, sebenzisa kokungenela kancane esibuhlungu. Ngokwesibonelo, Ligation - uphonsa by ISIZINDA ku izindandatho ekhethekile eyenziwe latex. Khangela, basibekele igazi eligciniwe ukuze zokwakheka ubuhlungu, ngemva kwalokho boma bese ewa bebodwa.
Ungakhohlwa mayelana dizarterizatsiyu - ukusebenza, phakathi kwesikhathi lapho imikhumbi e-ingquza zibambene. It ezidlula phansi ukulawula umshini ultrasound. Technique ayikuvumeli ukwenza iphutha: udokotela ihlanganisa kuphela igazi indlela eya ISIZINDA. Abanaso ugcwalise ngegazi - imfundo ayinakho ithuba ukuthuthukisa kanye nenqubekela phambili.
hemorrhoids Yemvelo izidakamizwa asigcinele kona esikhathini esizayo, futhi Mother Nature. Abesilisa Kunconywa zigwinye utshwala nekufakwa cortex kwezinso futhi aspen. Indaba kungcono ukuqoqa kwentwasahlobo: awabuyiswanga e isiqu nokusakazwa ayo kanye nezakhi. eyikhulu amagremu amagxolo izinso uthele 70% utshwala, emasontweni amabili ukugcizelela futhi baphuze kathathu nsuku zonke ngaphambi kokuba ukudla ithisipuni elilodwa. Inkambo ngokuvamile ihlala ngenyanga. Nge le ngxube kungenziwa nokwelashwa elangeni endaweni bendunu.
Indlela ukwelapha hemorrhoids, uma aspens edolobheni lakho emini ngomlilo ngeke uthole? Kulokhu, ungasebenzisa ukhilimu zemvelo wenza ugwayi, uju, nojamu. Zonke izingxenye axutshwa ngezabelo alinganayo. Nazi nje eziningi ugwayi akudingekile ukuze ungeze - anele ingcosana. Ngaphambi kokufaka isicelo mafutha qiniseka ugeza potassium permanganate. Khona-ke gcoba izingxenye zangaphakathi kanye emathunjini. Yokwelapha ithatha cishe izinsuku ezingu-10. Abesilisa Ungase futhi usebenzise decoction of burdock kanye fennel ekwelapheni hemorrhoids uyazondwa.
Amanye amakhambi abantu
uphulukisa yemvelo hemorrhoids ezingabantu zihlanganisa lokubhalisa kanye isanqante wakho itiye. Ukuze wenze lokho, nemifino ezintathu benqunywa eziqongweni ngobusuku obubodwa bagcizelele kuyo ilitha lamanzi abilayo. Decoction baphuze izikhathi ezimbili noma ezintathu ngosuku - ingilazi for reception ngamunye. Kanyekanye usufakwa ingquza swab ofakwe uwoyela lalesi sihlahla. Yokwelapha ithatha cishe izinsuku ezingu-10. By the way, itiye isanqante ingasetshenziswa ukulungiswa zokugeza: ezithathwe esimweni ehlezi ngaphambi sokulala.
Kuyasiza futhi ukwelashwa nge streptotsida. amaphilisi Ten ziyacolwa, wawathela singene petrolatum uthi lokubeka imbiza, wengeza amaconsi ambalwa uwoyela peppermint. Uma lawa mafutha sisetshenziswa njalo kumasayithi, kuyilapho okwenza umzimba ezikhethekile ezingokomzimba, ungathatha balahle isishayo phezu izinsuku ezinhlanu.
Ukusebenzisa imithi yendabuko, ungakhohlwa ukuthi ukuzelapha kungaba yingozi empilweni. Ngakho-ke, zonke izenzo ubuze udokotela wakho. Madoda, unakekele impilo yakho, 'yiba namandla, esebenzayo futhi bejabule!
Apert Syndrome - ukuphazamiseka eziyinkimbinkimbi zofuzo
Holiday Village "Ludmila", Vityazevo: izithombe kanye nokubuyekeza